​काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक ६ जना बेपत्ता, बेपत्ताको संख्या बढ्यो
काठमाडौ । दक्षिणकाली जान भनेर अघिल्लो मंगलबार घरबाट हिँडेकी ४८ वर्षीया पूर्णदेवी शाही अझै घर फर्किएकी छैनन् । खोजीका लागि प्रहरीलाई उजुरी दिए पनि प्रहरीले पूर्णदेवीलाई भेट्न सकेको छैन ।..
​हिंसा त्यागेर वार्ता थाल्न राष्ट्रसंघ महासचिवको आग्रह
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान की–मुनले सबै प्रकारका हिंसा त्यागेर संवादका माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्न नेपालका सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति चासो लिँदै महासचिव वानले सबै..
माओवादीका समायोजित पूर्व लडाकु अब शान्ति मिसनमा
काठमाडौं । नेपाली सेनामा समायोजनपछि राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय अन्तर्गत खटिएका माओवादीका पूर्वलडाकू आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने भएका छन्। “पार्टी्विशेषको दर्शनबाट दीक्षित लडाकूलाई सुरक्षा निकायमा प्रवेश गराउनै..
​पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन, वैकल्पिक बाटो खोज्दै सरकार
काठमाडौँ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण संवैधानिक जटिलताका कारण समस्यामा परेको छ । सरकारले मङ्गलवार व्यवस्थापिका–संसद्मा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत..
​फोटोकपी मेसिनबाट नक्कली नोट छाप्ने युवक पक्राउ
काठमाडौ । नक्कली नेपाली नोटको कारोबार गर्ने वागेश्वरी–७ नुवाकोट निवासी २० वर्षीय दीपक न्यौपाने पक्राउ परेका छन् । गँगबु बसपार्क नजिकैको आकाशे पुलमा रु एक हजारका ८० थान नक्कली नोटसहित यही..
​नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट, पार्टी निर्देशन विपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद..
​गाउँको कानुन नमानेपछि प्रहरी चौकीमा ढुङ्गामुढा
मुगु । गाउँको चलनचल्तीअनुसार नचलेको भन्दै जरिवाना तोकेका व्यक्तिलाई प्रहरीले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै मुगु गाउँका गाउँलेले सीमा प्रहरी चौकी मुगुमा गएराति ढुङ्गामुढा गरेका छन्। आफ्नो घरमा गाउँलेले तोडफोड गरेपछि मुगु–८..
​बेहुली लिन गएको जन्ती प्रहरी नियन्त्रणमा, यसरी रोकियो एउटा वाल विवाह
दाङ । तुलसीपुरको त्रिशिद्धेस्वरी मन्दिरमा मंगलबार दिउँसो १ बजेतिर विवाह चलिरहेको थियो। वातावरण निकै उल्लासपूर्ण थियो। केटा पक्षका मानिसहरु वसमा चढेर जन्ति आएका थिए। मन्दिरमा बेहुला वेहुलीको विवाह सम्पन्न गर्न..
​वीरगञ्जमा अस्पताल भित्रै गोली चल्यो, ३ घाइते, वीरगञ्ज विहानैदेखि अशान्त
वीरगञ्ज । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज परिसरभित्र गोली चल्दा तीनजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा विनोद महतो, प्रहरी जवान नरेन्द्र चौधरी र आइतबरियादेवी छन् । उनीहरुको खुट्टामा रबरको गोली लागेको..
​मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवका गाडीमा पनि अब राष्ट्रिय झन्डा र लोगो हुने
के हुन्छ मुख्यसचिवको गाडीमा ? मुख्यसचिवले चढ्ने गाडीमा मन्त्रीहरूको झैँ राष्ट्रिय झन्डा फहराइनेछ, त्यस्तै नम्बरप्लेटमा निजामतीको लोगो र तारा पनि राखिनेछ । सचिव चढ्ने गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा र नम्बरप्लेटमा निजामतीको लोगो राखिनेछ,..
​टेलिभिजनको कार्यालय नजिकै विराटनगरमा बम विष्फोट, एकजना घाइते
विराटनगर । विराटनगरको व्यस्त बसपार्कनजिकै आइतबार साँझ बम विष्फोट भएको छ । बम विस्फोट हुँदा एकजना घाइते भएका छन् । विस्फोटबाट विराटनगर–१३ का २४ वर्षीय निरज साह घाइते भएका हुन् ।..
​काठमाडौंमा भूकम्पको धक्का महसुस, आज एकैदिन ३ वटा पराकम्पन​
काठमाडौं । आइतबार साँझ काठमाडौं उपत्यकामा ५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । साँझ ७ बजेर २ मिनेटमा सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएको ५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको धक्का महसुस भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन..
वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको सहभागितामा टिकापुर घटनाको योजना बनाइएको एमाले सचिव भट्टराईको आरोप
काठमाडौं । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अब सात प्रदेशबाट माथि नजाने अडानमा रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले एमालेको भदौ..
​माओवादी अध्यक्ष वैद्यले राष्ट्रपतिलाई भने-टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध
काठमाडौं । सरकारले सेना परिचालन गरेर राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको र यो नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको..
बिहिबार राति परेको भीषण वर्षाले ल्याएको पहिरोमा परी पाँचजनाको मृत्यु
नुवाकोट । बिहिबार राति परेको भीषण वर्षाका कारण नुवाकोटको गोर्स्याङ गाविस–२ गएको पहिरोमा परी कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । गोर्स्याङ गाविसस्थित ढुंगाखानीमा पहिरोबाट दुईवटा घर पुरिदा २५ वर्षीय..
​आन्दोलनकारी शक्तिले चार शर्त राखे : डा. भट्टराई
काठमाडौं । सीमांकनको विरोधमा आन्दोलन गर्दैै आएका मधेसवादी लगायतका राजनीतिक शक्तिले चारवटा शर्त अघि सारेको एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले खुलासा गरेका छन् । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत..
​आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान जारी गर्नुपर्छः महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को १६औँ वार्षिक साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले..
​यौनधन्दा चलाउने मालिक्नीसहित दुर्इ जोडी पक्राउ
सुनसरी । सुनसरीको इटहरीस्थित एक होटलबाट प्रहरीले यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न होटल संचालिकाहसहित दुई जोडीलाई नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक मुद्दा चलाएको छ। यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न इटहरी नगरपालिका-५ स्थित सपना होटलकी सञ्चालिका सपना श्रेष्ठसहित..
​भन्सार आधुनिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि भन्सारको आधुनिकीकरणमार्फत सेवाग्राहीको समय तथा लागत मूल्यलाई सम्मान गर्ने गुणस्तरीय भन्सार सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भन्सार विभागको आयोजनामा आजदेखि सुरु गरिएकोे भन्सार..
राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिलाई सेनाको प्रष्टिकरण-सेना परिचालनको रुपमा नबुझियोस्
काठमाडौं । आन्दोलनकारी दलले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाली सेनाले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति एवम् राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले..
​भक्तपुर हनुमन्तेको बाढीले डुब्यो (फोटो फिचर)
​भक्तपुर । बिहीबार बिहान परेको भीषण पानीपछि आएको बाढीले भक्तपुर र मध्यपुर थिमि पूरै डुबानमा परेको छ । हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले खोला आसपासका बासिन्दाको बिजोग भएको छ। भक्तपुरको बस्तीमा..
​भूकम्पपीडितको सातटन सामान जापानको गोदाममा अलपत्र
जापान । नेपाल—जापानबीच सिधासम्पर्क नहुँदा भूकम्पपीडितको सात टनभन्दा बढी खाद्यान्न तथा लत्ताकपडासहितका अत्यावश्यक जिन्सी सामान गोदाममा महिनौँदेखि रोकिएको छ । नेपाल पठाउने गतिलो साधन अभावमा पीडितका लागि जापानमा उठाइएको करिब सात..
​संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामाथिको छलफलमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताले के के भने ?
संविधान एउटा सम्झौताको डकुमेन्ट हो यसमा सबैका सबै भनाइ र मागहरु पूरा हुन सक्दैनः कोइराला नेपाली कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभामा बोल्दै सबैको सहमतिबाट यो प्रतिवेदन पारित हुनुपर्ने बताएक..
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्‍यो भूकम्प प्रभावित जिल्ला वर्गिकरण, १४ जिल्ला क वर्गमा
काठमाडौ । पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोख्रेलले आजैबाट भूकम्पुपपछिको पुननिर्माण थालनी भएको बताएका छन्। भूकम्प आएको १२० दिन पछि मंगलबार बसेको प्राधिकरणको पहिलो बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्राधिकरण गठन..
​कैलालीमा मारिएका दुवै प्रहरी निरीक्षक कञ्चनपुरका
भीमदत्तनगर । कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी र थरुहट आन्दोलनकारीबीच भएको हिंसात्मक झडमा परी कञ्चनपुर घर भएका दुई प्रहरी निरीक्षकको मृत्यु भएको छ। सोमबार दिउँसो भएको झडपमा परी सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ..
​संविधान नरोक्ने शीर्ष बैठकको निर्णय, कैलाली घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही
काठमाडौं । प्रहरीका एसएसपीसहित आठजनाको ज्यान जाने गरी कैलालीमा भएको हिंसात्मक झडपपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधान निर्माण नरोक्ने निर्णय गरेका छ। अन्तिम चरणमा पुगेको..
मोदीले सुशीललाई फोनमा भने, ’हिंसा रोक, सम्वादबाटै समाधान खोज’
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई फोन गरेका छन् । मोदीले मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री कोइरालालाई फोन गर्दै सोमबार भएको हिंसात्मक..
​दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेनाले गोली हान्न सक्छ - गृहप्रवक्ता
काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि गृहमन्त्रालयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले उपप्रधानमन्त्री एबम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई परिस्थितिको ब्रिफिङ गरे । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ठूलो हताहती भएपछि परिस्थिति प्रहरीको..
केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा सेना परिचलान
काठमाडौं । गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा सेना परिचालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । टीकापुर घटनापछि बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन..
​टिकापुरमा एसएसपीसहित २० को मृत्यु, ११ सशस्त्र, ६ नेपाल प्रहरी र ३ आन्दोलनकारी मारिए, ५० बढि घाईते
काठमाडौं । कैलालीको टिकापुरमा भएको भिडन्तमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यानेसहित २० जनाको मृत्यु भएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका ११, नेपाल प्रहरीका ६..
Results 1098: You are at page 29 of 37